ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး တင်မက အပေါင်းပါ ရာဇဝတ်ကောင်များအား ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ရန် လုံလောက်သွားပြီ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
Aung N Htwe shared ဂိုလ်ရှယ်လေး’s status
ရာဇဝတ်ကောင်များအား ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ရန် လုံလောက်သွားပြီ
မြန်မာပြည်အတွင်းမှ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးလဲဖြစ် အခွင်အာဏာလဲရှိသူဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာရှင်ခေတ်ကာကတည်းက ၎င်း၏လုပ်ရပ်များအတွက် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရပ်သားများကို ကြူးလွန်သော ရာဇဝတ်မှုများဖြင့် အရေးယူရန် လုံလောက်သော သက်သေ အထောက်ထားများနှင့် ၎င်းနှင့်အတူ ပါဝင်ခဲ့သော အခြား စစ်ဗိုလ်ချုပ်နှစ်ဦး တို့၏ အကျဉ်းရုံန်းသတ်ဖြတ်မှု ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှု အရပ်သားများအား ကျေးကျွန်များသဖွယ် ၎င်းတို့၏ စစ်တပ်ဖွဲ့ အစုစည်းများဖြင့် ပြုမူဆောင်ရွက်သော တိုင်းရင်းသား ပုန်ကန်သူနယ်မြေအတွင်းမှ လုပ်ရပ်များအား စွဲချက်တင်ရန် လုံလောက်နေပြီ ဖြစ်လေသည်။
Military activities carried out by Myanmar’s powerful minister of home affairs when the country was under dictatorship could constitute war crimes,anew study charges, saying there is evidence that he and two other generals were responsible for the executions, torture and enslavement of civilians by troops duringalarge-scale offensive against ethnic rebels.
ဟားဘတ် တက္ကသိုလ် ဥပဒေရေးရာ ဌာနဆိုင်ရာ ကျောင်းမှ လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ လေ့လာစောင့်ကြည့်သူများမှ မြန်မာပြည်၏ အရှေ့ဘက် နယ်စပ်တလျောက်ဖြစ်သည့် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှ ၂၀၀၅ နှင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်အတွင်းက အစိုးရ၏ သက်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်ရေး ချိုးဖေါက် ကျူးလွန်မှုများအာ ၃ နှစ်ကြာမျှ အချိန်ယူလေ့လာစုဆောင်း၍ ယခု အစီရင်ခံစာအား ထုတ်ပြန် ခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
Human rights researchers at Harvard Law School said in the report released on Friday they spent three years collecting information about the government’s 2005-2006 counterinsurgency efforts in Myanmar’s Karen state along the country’s eastern border.
အဆိုပါ ပုဂ္ဂိ ုလ်များမှပင် လက်ရှိ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဖြစ်နေသူ ဝန်ကြီး ဦးကိုကို မှာ တချိန်က မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသဆိုင်ရာစစ်ဘက်ဌာနတွင် ညွန်ကြားကွပ်ကဲသူဖြစ်ခဲ့ပြီး သူ၏ အပေါင်းပါအဖြစ် ဆောက်ရွက်ပူးပေါင်းခဲ့ သောအခြား အဆင့်မြင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှိနှစ်ဦးတို့ကိုလည်း (နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှု ခုံရုံးမှ ရာဇဝတ်ကောင်များအား ဖမ်းဝရမ်းထုတ်နိုင်ရန်အလို့ငှာ သေခြာလုံလောက်၍ သက်သေခံနိုင်သော လုံလောက်သည့် အထောက်ထားများ ရှိနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အတိလင်း ပြောဆိုထားခဲ့သည်။
They said there was enough to justify the issuance of an International Criminal Court arrest warrants for Home Affairs Minister Ko Ko, who was head of the army’s Southern Command during that offensive, and his two high-ranking colleagues.
အစိုးရမှ ထိုကာလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော မတည်ငြိမ်မှုများသည် အတော်ပင် ရှောင်လွဲသွေဖယ်၍ မရအောင် ဖြစ်ခဲ့သော ကာလ ဖြစ်နေပြီး ကျူးလွန် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ယခုအချိန်တွင် ရှေ့သို့သွားရန်ရှိသော ကာလဖြစ်ပြီး အနောက်သို့ ပြန်လှည့်ရန် အနေထားမျိ ုး မဟုတ်သော အခါသမယ ဖြစ်ကြောင်း တုံ့န်ပြန်ထားလေသည်။
သမ္မတ၏ အကြံပေးဖြစ်သည့် တပ်မတော်မှ ထွက်ထားခဲ့သူ နေဇင်လတ်မှလည်း “ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတလျောက်သို့ ချီတက်နေပြီဖြစ်ပြီး အဆိုပါချီတက်ရာ လမ်းကြောင်းတွင် လူတိုင်းမှာ အနှောက်ယှက် အရှုပ်ထွေးများ ဖေါ်ပြစွတ်စွဲ၍ ခရီးမတွင်သော လုပ်ရပ်မျိုး မလုပ်ပဲ အားလုံး အဖက်ဖက်မှ ဝင်ရောက် ဆောင်ရွက်ရန်သာ လိုကြောင်းပြောခဲ့ပါသည်။
“We are going throughademocratic transition,” said Nay Zin Latt, one of the president’s political advisers and an ex-army officer. “Everyone should be encouraging the reform process rather than putting further obstacles along the way.”
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်၏ တွေ့ရှိဖေါ်ထုတ်မှုများမှာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်မျှ အုပ်ချုပ် မင်းမူခဲ့သော စစ်ဝါဒစနစ်ပြီးနောက်တွင် ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စစ်တပ်မှပင် ချယ်လှယ် လက်ဝါကြီးအုပ်လွှမ်းမိုးထားသော အရပ်သား အစိုးရတခုအဖြစ်သို့ ပြေင်းလဲ၍ အလွန် အထိ အတို့ မခံနိုင်သော အထူးသတိထားရမည့် ကာလတွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော်ငြားလည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လာမည့် သတင်းပတ်တွင် အာရှ ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ရန် အမေရိကန် သမ္မတ အိုဗားမားအပြင် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များအဖို့ ဆိုဝါးရက်စက်လွန်းသော စစ်အုပ်စု၏ အုပ်ချုပ်မှု ကာလအနေထားများ အတွင်းမှ ကန့်လန့်တိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သော အခွင့်အာဏာ နှင့် ရားထူးအလိုက် တာဝန်ယူသူတို့၏ အခြေနေကို ဖေါ်ထုတ် တင်သွင်းလာခြင်းလဲ ဖြစ်သည်။
ယခုဝယ် ဝန်ကြီး ကိုကိုမှ ရဲတပ်ဖွဲတခုလုံးအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသည့် သြဇာအာဏာကိုင်ဆောင်ခွင့်ရရှိသော ပြည်ထဲရေးဆိုင်ရာယန္တယားတွင် ရာထူးအကြီးဆုံး အမိန့်ပေးနိုင်သူ ပြန်လည် ဖြစ်နေပြန်သည်။ ထိုတင်မက သူ၏ အပေါင်းပါနှစ်ယောက်ဖြစ်သူ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ဇော်ဦးနှင့် ဗိုလ်ချုပ် မောင်မောင်အေး တိုမှာလည်း ကြီးမာသော ရာထူးရ အခွင့်အာဏာရှိသော နေရာများတွင် ပြန်လည် မြင်ရပြီး ကြီးမာသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ရသူများအဖြစ် ထပ်မံတိုးမြှင့်ထားပေးလေသည်။
အက်ဆိုစိရိတ်ပရက်စ်သို့ အဆိုပါ အစိရင်ခံစာရေးသားသူ နှင့် ဟားဗတ် ဥပဒေရေးဆိုင်ရာ ဌာန ကျောင်းအုပ်ကြီး အပြင် အစိရင်ခံစာအတွက်ဆောင်ရွက်သူ ကမ္ဘာ့ တရားဥဒေ မျှတရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ရေး အတွက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်သူ မက်သူ ဘတ်ချ်ဟာတို့က ဝန်ကြီး ကိုကိုသည် မြန်မာပြည်အရှေ့ဘက်ဒေသခြမ်းအတွင်း လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ တသီတတန်ကြီးဖြစ်သော ချိုးဖေါက်မှုများကို အားတက်သရော အားရပါးရ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ကြီးကြပ်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင့် ရှု့မြင်သည်ကို ပြောကြားထားပါသည်။
“Ko Ko oversaw egregious rights violations in eastern Myanmar,” Matthew Bugher, global justice fellow at Harvard Law School andaprincipal author of the report told The Associated Press. “His prominent position in Myanmar’s Cabinet calls into question the government’s commitment to reform.”
နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီမှုများအရ ခွင်မပြုပဲ အကာကွယ်ပေးထားသည့် အမိန့်အာဏာကိုင်တွယ်ကျင့်သုံးသူတို့၏ လိုက်နာရမည်ဖြစ်သော သဘောတရား သတ်မှတ်ချက်အား အခြေခံသော အရာများအား ဝန်ကြီးကိုကိုနှင့် သူ၏ နောက်လိုက် အပေါင်းပါများက ချိုးဖေါက်ထားကြောင်း…အဆိုပါသဘောတရားသည် မိမိ၏ လက်အောက်ငယ်သားများ၏ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများကို ဘောင်ကျကျ မျှတအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရသော အထက်အကြီးကဲများအဖို့ လိုက်နာရခြင်းဖြစ်ပြီး တစုံတရာ ရာဇဝတ်မှုနှင့်ဆိုင်သော အလွဲမှားများဖြစ်ပေါ်လာလျင်တောင် တိုက်ရိုက်မိမိနှင့်ပတ်သက်ခြင်းမရှိခြင်းဟု ဆို၍မ၇သော ပြဌာန်းထားချက်မျိုးလဲဖြစ်လေသည်။
အဆိုပါ စာတမ်းတွင် ပြည်သူဒေသခံတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် နေအိမ်များအား ဖျက်ဆီးခြင်း နှင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများအပေါ် တိုက်ခိုက်ခြင်း သတ်ဖြန်သုတ်သင်ခြင်းများ ပါဝင်နေပြီး မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းဒေသအတွင်းရှိ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များမှ ကြိမ်ဖန်တလဲလဲ ပေါ်တာဆွဲခြင်း များ မကြာခန ကျူးလွန်ခဲ့ကြကြေင်းကို ထည့်သွင်းဖေါ်ပြထားသည်။
နေဇင်လတ်ဆိုသော သမ္မတ အကြံပေးသူမှ အဆိုပါ စွဲဆိုသော အရာများမှာ အလွန်အကြူူးပုံကြီးချဲ့ကာထားသည်ဟုလည်း ဆိုပါသည်။ ထို့အပြင် စစ်ဖြစ်နေသော ကာလနှင့်ဒေသဝယ် ရှောင်လွဲလို့မရနိုင်သော လုပ်အားပေးပေါ်တာများခေါ်ယူသုံးစွဲသောအခြေနေမှာ မမျှော်လင့်ပဲ လုပ်ရသော ကိစ္စရပ်ဖြစ်သည့်အပြင် ဘာကြောင့်များ မြန်မာနိုင်ငံ အတိတ်အပုတ်ဟောင်းအား ပြန်လည်တူဆွနေမည့်အစား အဆိုပါ စာတမ်းနှင့် စွဲချက်တင်သူတို့မှာ လက်ရှိ အိုက်စစ် ဆိုသော အစ္စလမ် အစွန်းရောက်များ၏ လူ့အခွင့်ရေး ချိုးဖေါက်မှုများအား မဝေဖန်ရသနည်းဟု ပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်ချေပထားကြောင်းပါ……
“In times of conflict and war, there are incidents when violations such as grabbing porters happen unavoidably,” he said. “Why don’t they criticize the human rights violation committed by ISIS instead of digging into Myanmar’s past?”
လက်ရှိအခြေနေအရမှာပင်… ကရင်လက်နက်ကိုင်များနှင့် ဗမာစစ်တပ်ဖွဲ့ တို့၏ ကတောက်ကဆ ဖြစ်စဉ်တွင် စစ်ဖက်မှ သတင်းထောက်ကိုပါကြီးအား သေလောက်အောင် လူမဆန် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုနောက်ပိုင်းတွင် သိက္ခာမရှိအရှက်ကင်းသော မြန်မာပြည်အတွင်းမှ မြန်မာစစ်တပ်အဖို့ လောလေလတ်လတ် သတင်းပတ်မှာ ပင် အများ မျက်ခုံးမွေးစူး အာရုံစိုက်လာခဲ့ကြလေသည်။ စစ်တပ်၏ အဆိုအရ အဆိုပါ သတင်းထောက်မှာ ချုပ်နှောင်ထားသော တပ်ရင်းအချုပ်အနှောင်တွင် ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းမှ သေနတ်အား လုယူရန်အားထုတ်မှုကြေင့် ပစ်ခတ်ကြောင်းအား မြန်မာ မီဒီယာမှ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမှ ထုတ်ပြန်သော ထုတ်ပြန်ချက်အား အခြေခံ၍ ဖေါ်ပြထားလေသည်။
For the present situation, Military impunity in Myanmar came under the spotlight in recent weeks after the army admitted to fatally shootingajournalist, Par Gyi, who was reporting on clashes between Karen fighters and the Burmese military. The army said that the journalist had been in its custody,and he had tried to seizeagun, according toamilitary statement quoted by the Burmese media.
ဂျာနယ်လစ်များမှ ကိုပါကြီး၏ ရုပ်အလောင်းအား မိသားစုအား အကြောင်းမကြားပဲ မြန်မာစစ်တပ်မှ ကိုပါကြီးကို မြေမြုပ်ထားခဲ့သည်မှ မှန်ကန်သော ဇာတ်လမ်းတပုဒ် မဟုတ်ရပဲ မမှန်ကန်သော လုပ်ကြံ ဇာတ်လမ်း ဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေကြောင်း နှင့် လိမ်လည်ကြသောဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောဆိုနေခဲ့ပါသည်။
Journalists said they believed the story was untrue and questioned why the military had buried Mr. Par Gyi’s body without contacting his family. After an outcry by human rights organizations, the government ordered the journalist’s body exhumed.
စာရေးူသူ အမြင်အား ပြောရပါလျင် လက်ရှိ မြန်မာပြည်တွင်းမှ ယခင်ရော ယခုပါ ရာဇဝတ်မှုကြူးလွန်နေသော အာဏာပိုင်များအဖို့ မကြာခင် နိုင်ငံတကာ တရားရုံးမှ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးသို့ အဆိုပါ ရာဇဝတ်ကောင်များအား ဖမ်းဆီးရန် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်၍ ၇တဲ့နည်းနှင့် ဖမ်းဆီးပေးရန် သံတော်ဆင့် သံမန်စာ အမိန့် ထုတ်ပြန်လာမည် ဖြစ်ကြောင်းပါ…..
ဖေါ်ပြပါဆောင်းပါးအား ယနေ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းစာ (၁၄၆) စောင်များတွင် ဖေါ်ပြထားချက်အား အခြေခံ ထုတ်နုတ် တင်ပြပေးခြင်းပါ